Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Inona indray no manaraka izany ?
Inty sy nday: Inona indray no manaraka izany ?
Dia iny vita omaly teny teny Antsonjombe iny ny endrika iray nentin’ny filohampirenena nanaovana fampielezan-kevitra ka nilalaovana pôlitika an’ireo ankizy mpianatra. Ny fizarana kojakojam-pianarana ho an’ireo mpianatra moa no natao. Afa-po tsara, angamba, izao ny filohampirenena mivady satria nangorom-potsy ny kianjan’Antsonjombe, ary hipoka mpianatra.
Ny dikan’izany, efa azo antenaina ve ny ho voka-pifidianana ho azony rehefa tonga izay fotoana izay.
Tsy azo hadinoina fa ny tetika mahomby indrindra amin’ny « dokam-barotra » (fampielezan-kevitra), hoy ny mpahay an’io raharaha iray io, dia ny fakana ny fon’ny ankizy.
Fa rehefa tratra iny dingana iray omaly iny, inona indray izany izao no manaraka ?
Tsy mbola nisy fotoana ka tsy nieritreretan’ny Hvm sy Rajaonarimampianina hevitra hahafahana manamafy ny toerana sy ny fomba hampaharitra eo amin’ny fitondrana mantsy, ka nampiasaina avokoa ny zavatra rehetra tonga tao an-tsainy.
Amin’izao ankatoky ny fahavaratra izao dia azo antoka fa mbola hidina eny amin’ny faritra iva izay sady be mponina nefa ianjadian’ny voka-dratsin’ny rano amin’ny fotoam-pahavaratra koa ry zareo mpitondra izao. Hanely hevitra hisarihana ny fon’ny mponina eny, dia hizara zavatra, mety ho vola mihitsy.
Tsy tokony hadinoina fa efa mitana ny toerana faharoa eo amin’ny laharan’ny arofenitra eo anivon’ny governemanta i Benjamina Ramanantsoa izay misora-tena ho « olon’ny faritra iva », ary miseho azy ho havanana amin’ny filalaovana ny mponina amin’ny faritra iva.
Ny minisitra ny Mponina, Onitiana Realy moa dia iny mitety faritra mizara vola amin’ny « asa tana-maro » na « Himo » iny, ary tsy mitandro hasasarana tokoa satria manana tanjona nofaritana.
Raha ny marina dia tsy tokony ho lany hevitra hilalaovana vahoaka ny mpitondra Hvm satria, araka ny tenin’i Pety Rakotoniaina dia « tsy ny tanjona hikatsahana ny soa iombonana no mahadodona sy nosoritan’ny fitondram-panjakana ho zava-dehibe sy laharam-pahamehana fa ny hanamafisana ny fahefam-panjakana eo aminy mba hisitrahany tombontsoa manokana sy vola amam-boninahitra ». Rava tanteraka ao antsain’ny mpitondra mantsy, hoy i Pety Rakotoniaina, ny fitadiavana ny mahasoa ny ambanilanitra fa izay hahatsara endrika sy toerana ahy eto amin’ny fitondrana no mahamaika ny mitana ny fahefam-panjakana .
Tsy tokony ho lany hevitra amin‘izay hahatrarany ny tanjona nofaritany izany ny mpitondra fanjakana Hvm, satria ny fahefam-panjakana efa eo ampelan-tanany, ny volam-panjakana azony ilibana, ny mpiasam-panjakana eo ambany vahohony, ny fitaovam-panjakana azony lalaovina, sy ny sisa.
Mety ny fisafidianana ny sokajin’olona haleha mba hatao fitaovana sy hanaovana fampielezan-kevitra « pôlitika maloto » izany sisa mampanahirana an-dry zareo satria samy mety manana ny maika aminy araka ny sokajy misy azy ireo mpiara-dia ao anatin’izao fitondrana Hvm izao.
Ny sasany, araka ny voalaza etsy aloha, mety hitaky ny fihazakazahana eny amin’ny faritra iva, ny hafa kosa mety hanipika fa ireo any amin’ny faritra no ndeha hojerena indray, na hotohizana any aza aloha io fizarana kojakojam-pianarana na « kits scolaires » io. Eny, mety hanao fahagagana tampoka mihitsy ny Hvm momba izao fidangan’ny vidim-piainana izao, raha takatry ny hoza-dohany ny vahaolana tokony hirosoana amin’izany.
Dia hiarahantsika mahita eo izany rehetra izany e !